အားလုံးက တစ်နေ့တစ်နေ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ လောကဓံတွေ၊ မတူညီတဲ့လူသားတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတဲ့နောက် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကို သီးသန့်ရှာဖွေနေရသလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ရခဲလှတဲ့လူ့ဘဝမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့က လူတိုင်းမျှော်လင့်တောင့်တနေရတဲ့အရာမဟုတ်ပါလား။ ဒါပေမယ့် အားလုံးက တစ်နေ့တစ်နေ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ လောကဓံတွေ၊ မတူညီတဲ့လူသားတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတဲ့နောက် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကို သီးသန့်ရှာဖွေနေရသလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်စရာဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
လူတိုင်းကို သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေအရင်းလို သဘောထားစရာမလိုပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တချို့တွေက သင့်ရဲ့အတွင်းရေးကို သိထားမယ်ဆိုရင် တစ်ချိန်ချိန်မှာ သင့်ကိုနောက်ကျောဓားနဲ့ ထိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဖွင့်ပြောစရာရှိတာပြောပါ။ ဒါပေမယ့် မပြောသင့်တာကို မပြောပါနဲ့။ မပြောသင့်တာတွေ ပြောထားမိရင် တစ်ချိန်ချိန်မှာမြားဦးက သင့်ဘက်ပြန်လှည့်လာနိုင်ပါတယ်။
စကားအများကြီး ပြောနေစရာမလိုပါဘူး။ အရေးကြီးတာက သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်က ပျော်ရွှင်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စကားနည်းတဲ့သူတွေက ပိုပြီးပျော်ရွှင်ရလေ့ရှိတယ်ဆိုတာမျိုး ကြားဖူးကြတယ်မဟုတ်လား။ ဒီလိုပဲပေါ့။
၃။ နေ့ရက်တိုင်းမှာ သင်ယူနေပါ။
နေ့စဥ်နေ့တိုင်း အသစ်သစ်သောအရာရာကို သင်ယူတာက သင့်အတွက် ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုခုယူဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သင်မတတ်မြောက်သေးတဲ့အရာတစ်ခုခုကို တတ်မြောက်သွားတဲ့အချိန် ရရှိလာတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုက အရမ်းကိုအရသာရှိတာနော်။
မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမပါတဲ့ကူညီမှုက သင်တို့အတွက် အေးချမ်းတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်စေမှာပါ။ ဒီတော့ သင်တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပါ။ ငွေအားမတတ်နိုင်ရင်တောင် လူအားနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ အလှူဒါနတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ပျော်စရာကိစ္စတိုင်းအတွက် ရယ်မောနိုင်ပါစေ၊ ရယ်မောခြင်းက အသက်ရှည်စေပြီး သင့်ရဲ့ဘဝအတွက် ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ထပ်မံယူဆောင်လာပေးမယ်လို့လည်း အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ပြုံးလည်းပြုံး၊ ရယ်မောနိုင်ဖို့အတွက်လည်း မမေ့လျော့ပါနဲ့။
သင်လုပ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကြောင့် ကြုံတွေ့လာရတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဒါတွေအားလုံးကိုမေ့ပစ်ပြီး အရာအားလုံးကို အသစ်ကပြန်စပါ။ သင်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ဘာအကူအညီမှမပေးတဲ့ ဘေးထိုင်ဘုပြောသမားတွေကိုလည်း ခေါက်ထားလိုက်ပါ။ ချီးမွမ်း (၇) ရက်၊ ကဲ့ရဲ့ (၇) ရက်ပဲမဟုတ်လား။
သေရေးကိုဘယ်သူမှကြိုမသိနိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် သင့်ရဲ့မိုက်မဲတဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် တန်ဖိုးရှိတဲ့လူ့ဘဝကို အဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့။ ဒီတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ နေထိုင်စားသောက်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ချစ်ခင်ရသူတွေအတွက် အချိန်ပေးပါ။ ဒါပါပဲ။
ပရိသတ်ကြီးရေ…။ တချို့အတွက် ပျော်ရွှင်မှုက ပိုက်ဆံဆိုပေမယ့် တချို့ကျတော့လည်း ဒီလိုမျိုး ငွေကြေးအောင်မြင်မှုတွေမပါဘဲ ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေနိုင်ကြပါတယ်။ သင်ရော ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ??? ပျော်ရွှင်နေရဲ့လား??? ပျော်ရွှင်မှုအစစ်အမှန်ကိုမခံစားရသေးဘူးလို့ထင်နေရင် ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို ကျင့်သုံးကြည့်ပါနော်။